Amnestii Internaashinaal: Tarkaanfileen Mootummaa Itiyoophiyaa Rakkoo Jiru Daranuu Hammeessa
Onkoloolessa 19, 2016
“Tarkaanfiin irree-cimaan Mootummaa Itiyoophiyaatiin fudhatamaa jiru eega mormiin Sadaasa bara 2015 biyyattii keessatti jalqabe irraa kaasee rakkoo biyyattii keessatti uumamee fi haga ammaa lubbuu namoota dhibba saddeetii olii galaafate daranuu hammeessa” – jedha – Amnesty Internaashinaal ibsa kaleessa baaseen.
Mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa biyyattii keessatti labsetti fufuudhaan, qajeelfamoota uggurawwan bal’aa baase ilaalchisuudhaan ibsa kana baase – Gareen mirga dhala-namaa ka sadarkaa Addunyaa kun.
Labsiin sun, ajaja mana-murtii malee hidhuu fi tarkaanfiilee ka biroo fudhachuu akka ehamu kan dubbate – ibsi Amnesty internashinaal kun, “tarkaanfiileen akkanaa duraanuu fudhataman, hiriirtoota qabanii mooraalee waraanaa keessatti hidhuudhaan, akka isaan maatii fi abukaatoolee seeraa isaanii wajjiin wal-arguu hin dandeenye taasisee jira” – jedha.
Itiyoophiyaa keessatti, haga ammaatti, namoota du’an ilaalchisee – ragaa dhaabbatni isaanii qabu gaafatamanii, akkana jechuun deebisan – qorataan mirga dhala-namaa, kan Ammestii Internashinaal – Fiisehaa Teklee.
“tarkaanfileen yeroo hatattamaa kun akka malee hamoo fi hiddha-bal’ifatoo, kanneen mirgawwan dhala-namaa haala yeroo hatattamaa keessatti tahe ugguramuu hin qabne irratti sodaa guddaa uumanii jiran!” jechuun ibse – Amenstii Internaashinaal ibsa kaleessa baase sanaan.
Tarkaanfiileen kun, sababaalee mormii waggaa tokkoof argine kana kakaasan, kanneen roorroo dhiittaa mirga dhala-namaa yeroo dheeraaf ture irraa maddan daranuu gad-fageessee hammeessa malee furmaata hin ta’u, ka jedhu – ibsi – Amnestii internashnaal, roorroolee dhaga’aman kana Mootummaan tarkaanfii akkanaan otuu hin taane karaa sirna-qabeessa taheen furmaata itti kennuu akka qabu hubachiisa.
“Tarkaanfiin adabbii daran fudhatamuu fi dhiittaa mirga dhala-pnamaa, haala jiru daranuu hammeessa malee furmaata hin ta’u!” jechuun hubachiisa – Gareen mirga dhala-namaa, ka sadarkaa Addunyaa – Amnestii internashinaal.
Gabaasa guutuu dhaggeeffachuuf kana cuqaasaa
Magaalaa Nageellee Booranaa fi olloota baaddiyaa isii keessatti nama 200 caalutti hidhame jedha warri achii dubbifne
Hiriira Mormii Magalaa Ambootti Geggeessame, Jedhamee fi Himannaa Hidhaa fi Ajjeechaa Arsii Nagellee Keessaa
Dr. Awal Aloo: Labsiin Yeroo Hatattamaa Mootummaa Itiyoophiyaa Uummata Mormii Irra Turee Biratti Waan Haaraa Miti
Masriin, Gareelee fi Namoonni Mootummaan Itoophiyaa Himate, Himannaa Sun Keessaa harka Hin Qabnu jedhu
KFO : Hidhaa fI Dorsiisi Oromiyaa Keessaa Jabaateera
“IHADEG Uummataaf Oolmaa Ooluu Yoo Fedhe Mootummaa Tokkummaa Biyyoolessaa Haa Hundeessu” Mormitoota
Mormitoota Itiyoophiyaa Kamiyyuu Biyyi Kiyya Deggertee Hin Beektu, Jedhu Prezidaantiin Masrii